Andro dia mankany Salzburg avy any Vienne
Day Trip mankany Salzburg
Fitsidihana sakafo ao Prague
Corpus Christi any Aotrisy
Ao amin'ny Neustadt of Salzburg, izay antsoina koa hoe Andräviertel, avaratry ny Zaridainan'i Mirabell, dia misy bozaka mivangongo, voalamina tsara, ilay antsoina hoe Kurpark, izay namoronana ny toerana manodidina an'i Andräkirche taorian'ny fandravana ireo bastion lehibe teo aloha. . Ny zaridaina spa dia misy hazo tranainy maro toy ny ririnina sy fahavaratra linden, serizy japoney, robinia, hazo katsura, hazo plane ary maple japoney.
Lalana an-tongotra natokana ho an'i Bernhard Paumgartner, izay nanjary fantatra tamin'ny alalan'ny tantaram-piainany momba an'i Mozart, mamakivaky ny sisin-tany miaraka amin'ny tanàna taloha ary mampifandray an'i Mariabellplatz amin'ny fidirana avy eo amin'ny Kurpark mankany amin'ny gorodona kely, ny faritra avaratry ny Zaridaina Mirabell. Na izany aza, alohan'ny hidiranao ao amin'ny zaridaina dia mety te hahita trano fidiovana ho an'ny daholobe aloha ianao.
Raha mijery an'i Salzburg avy any ambony ianao dia ho hitanao fa eo amin'ny renirano ilay tanàna ary voahodidina havoana kely ny andaniny roa. Any atsimoandrefana dia misy arc amin'ny faribolana misy an'i Festungsberg sy Mönchsberg ary any avaratratsinanan'i Kapuzinerberg.
Ny tendrombohitra mimanda, Festungsberg, dia ao amin'ny sisiny avaratry ny Salzburg Pre-Alps ary ahitana vatosokay Dachstein ny ankamaroany. Mönchsberg, Havoanan'ny Monks, dia misy konglomerate ary mifandray amin'ny andrefan'ny tendrombohitra mimanda. Tsy notarihin'ny Glacier Salzach izy io satria eo ambanin'ny aloky ny tendrombohitra mimanda.
Ny Kapuzinerberg, eo amin'ny ilany ankavanan'ny renirano toy ny tendrombohitra mimanda, dia an'ny sisiny avaratry ny Salzburg Limestone Pre-Alpes. Ahitana tarehin-bato mideza sy tampony midadasika izy io ary vatosokay Dachstein sy dolomita mifono sosona ny ankamaroany. Ny vokatry ny fikosehan'ny Glacier Salzach dia nanome endrika ny Kapuzinerberg.
Toeram-pisakafoanana ho an'ny daholobe ao amin'ny Mirabell Gardens Square ao Salzburg
Ny Mirabell Gardens dia matetika no toerana voalohany hitsidihana an'i Salzburg. Ireo fiara fitateram-bahoaka tonga ao an-tanànan'i Salzburg dia namela ny mpandehany hidina ny T-junction amin'ny arabe Paris-Lodron miaraka amin'ny Kianja Mirabell sy Dreifaltigkeitsgasse, ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka avaratra. Ankoatra izany dia misy fiantsonan'ny fiara, ny CONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garage, ao amin'ny Kianja Mirabell izay ny adiresy marina dia Faber Straße 6-8. Ity dia ny rohy mankany amin'ny fiantsonan'ny fiara miaraka amin'ny sarintany google. Eo ampitan'ny arabe ao amin'ny Kianja Mirabell laharana faha-3 dia misy trano fidiovana ho an'ny daholobe izay maimaim-poana. Ity rohy ity amin'ny google maps manome anao ny toerana tena misy ny trano fidiovana ho an'ny daholobe mba hanampy anao amin'ny fitadiavana azy ao amin'ny lakalin'ny trano iray eo ambanin'ny aloky ny hazo.
Unicorn ao amin'ny Salzburg Mirabell Gardens
Tohatra marbra neo-baroque, mampiasa ampahany amin'ny balustrade avy amin'ny teatra tanàna rava sy sarivongana unicorn, mampifandray ny Kurgarten any avaratra amin'ny rihana kelin'ny Mirabell Gardens any atsimo.
Ny unicorn dia biby miendrika a soavaly amin'ny tandroka eo amin’ny handriny. Lazaina fa biby masiaka sy matanjaka ary tsara tarehy izy io, ka tsy azo tratrarina raha tsy misy tovovavy virijina eo anoloany. Mitsambikina eo am-pofoan'ny virijiny ilay ombimanga, minono azy ary mitondra azy ho any amin'ny lapan'ny mpanjaka. Nampiasain'i Maria sy ireo ankizy von Trapp tao amin'ny Feon'ny Mozika ny dingan'ny terrasse.
Unicorns amin'ny dingana mankany amin'ny Zaridaina Mirabell
Zaridaina vato goavam-be roa, soavaly misy tandroka eo amin'ny lohany, mandry amin'ny tongony miambina ny "Musical Steps", ny vavahadin'ny fidirana avaratra mankany amin'ny Zaridaina Mirabell. Ny ankizivavy kely, nefa misaina dia mahafinaritra ny mitaingina azy. Ny unicorns dia tena tsara mipetraka eo amin'ny tohatra mba hahafahan'ny zazavavy kely hanitsaka azy mivantana. Toa mandrehitra ny eritreritry ny ankizivavy ny biby vavahady. Ny mpihaza iray ihany no afaka mitaona ny unicorn amin'ny virjiny madio. Ny unicorn dia voasarika amin'ny zavatra tsy hay lazaina.
Mirabell Gardens nojerena tamin'ny "The Musical Steps"
Ny Mirabell Gardens dia zaridaina baroque ao Salzburg izay ao anatin'ny Ivon-tantaran'ny UNESCO World Heritage Historic ao an-tanànan'i Salzburg. Ny famolavolana ny Zaridaina Mirabell amin'ny endriny ankehitriny dia notendren'ny Printsy Arseveka Johann Ernst von Thun teo ambany fitarihan'i Johann Bernhard Fischer von Erlach. Tamin'ny taona 1854 dia nosokafan'ny Emperora Franz Joseph ho an'ny besinimaro ny Zaridaina Mirabell.
Ny Lapan'i Mirabell dia naorin'ny printsy-areveka Wolf Dietrich tamin'ny 1606 ho an'i Salome Alt malalany. Ny "Baroque Marble Staircase" dia mitondra mankany amin'ny Efitrano Marble ao amin'ny Lapan'i Mirabell. Ny tohatra malaza misy sidina efatra (1722) dia mifototra amin'ny drafitr'i Johann Lucas von Hildebrandt. Naorina tamin'ny 1726 i Georg Raphael Donner, mpanao sary sokitra Eoropeana Afovoany indrindra tamin'ny androny. Raha tokony ho balustrade, dia voaaro amin'ny parapets an-tsaina vita amin'ny C-arcs sy volutes misy haingo putti.
Lava, manana volo volontsôkôlà mena sy maso fotsy, Salome Alt, vehivavy tsara tarehy indrindra ao an-tanàna. Nahafantatra azy i Wolf Dietrich nandritra ny fety iray tao amin'ny efitrano fisotroana tao an-tanàna tao Waagplatz. Tao no natao ny birao ofisialin'ny filankevitry ny tanàna ary nifarana ny hetsika akademika. Taorian'ny nifidianany ho Printsy Arseveka Wolf Dietrich dia niezaka ny hahazo fotoampitantanana izay nahafahany nanambady azy ho mpitondra fivavahana. Na dia teo aza ny fanelanelanana nataon'ny dadatoany, Kardinaly Marcus Sitticus von Hohenems, dia tsy nahomby io tetikasa io. Tamin'ny 1606 dia nanana ny Lapan'i Altenau, antsoina ankehitriny hoe Mirabell, naorina ho an'i Salome Alt izy, natao modely tamin'ny "Ville suburbane" romana.
Pegasus eo anelanelan'ny Liona
Bellerophon, ilay mahery fo lehibe indrindra sy mpamono biby goavam-be, mitaingina ny soavaly manidina voasambotra. Ny zava-bitany lehibe indrindra dia ny famonoana ilay biby goavam-be Chimera, fatin’osy misy lohan’ny liona sy rambo bibilava. Nahazo ny tsy fankasitrahan'ireo andriamanitra i Bellerophon rehefa avy nanandrana nitaingina an'i Pegasus Mount Olympus mba hiaraka amin'izy ireo.
Loharano Pegasus fa i Maria sy ny ankizy dia mitsambikina amin'ny Feon'ny Mozika rehefa mihira ny Do Re Mi. Pegasus, ny angano avy amin'Andriamanitra soavaly dia taranaky ny Olimpiana andriamanitra Poseidon, andriamanitry ny soavaly. Na taiza na taiza nikapoka ny kitrony tamin’ny tany ny soavaly misy elatra, dia nisy loharanon-drano nipoitra.
Liona miambina ny Tohatra Bastion
Liona vato roa nandry teo amin'ny rindrin'ny bastion, ny iray teo anoloana, ny iray somary niarina nibanjina ny lanitra, niambina ny fidirana manomboka eo amin'ny gorodona kely mankany amin'ny zaridainan'ny bastion. Nisy liona telo teo amin’ny akanjo fiarovan’ny Babenbergs. Eo ankavanan'ny akanjom-panjakana Salzburg dia misy liona mainty mitsangana miankavanana miankavanana amin'ny volamena ary eo amin'ny ankavia, toy ny eo amin'ny akanjon'i Babenberg, mampiseho bara volafotsy mena, ny ampinga Aotrisy.
Zwergerlgarten, ny Dwarf Gnome Park
Ny zaridaina dwarf, misy sary sokitra vita amin'ny marbra Mount Untersberg, dia anisan'ny zaridaina baroque Mirabell namboarin'i Fischer von Erlach. Tamin'ny vanim-potoana baroque, olona be loatra sy fohy no niasa tany amin'ny fitsarana Eoropeana maro. Nohajaina izy ireo noho ny tsy fivadihany sy ny tsy fivadihany. Tokony hanalavitra ny ratsy rehetra ny dwarf.
Western Bosket miaraka amin'ny Tonelina Hedge
Ny boquet baroque mahazatra dia "hazo" nokapaina kely tao amin'ny zaridaina Baroque Mirabell an'i Fischer von Erlach. Ny hazo sy ny fefy dia nolalovan'ny axis mahitsy miaraka amin'ny fanitarana toy ny efitrano. Ny bosket dia namorona mitovy amin'ny tranoben'ny lapa miaraka amin'ny lalantsara, tohatra ary efitrano ary ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny atin'ny lapa ho an'ny fampisehoana fampisehoana efitrano sy fialamboly kely hafa. Amin'izao fotoana izao, ny bosket andrefan'ny Mirabell Castle dia ahitana "lalana" andalana telo misy hazo linden ririnina, izay voatahiry amin'ny endrika geometrika miendrika goba amin'ny alàlan'ny fanapahana tsy tapaka, ary arcade misy trellis andohalambo boribory, ny tionelina fefy Nihazakazaka nidina i Maria sy ny ankizy rehefa nihira ny Do Re Mi.
Tulip mena amin'ny famolavolana fandriana voninkazo baroque ao amin'ny zaridaina lehibe parterre an'ny Mirabell Gardens, ny halavany dia mikendry ny atsimo mankany amin'ny lalana mankany amin'ny trano mimanda Hohensalzburg eo ambonin'ny tanàna taloha eo ankavian'ny Salzach. Taorian'ny fanaon'ny Arsidiosezin'i Salzburg tamin'ny taona 1811, ny zaridaina dia nohavaozina tamin'ny fomba zaridaina anglisy amin'izao fotoana izao nataon'ny Printsy Ludwig avy any Bavaria, miaraka amin'ny ampahany amin'ny faritra baroque voatahiry.
Tamin'ny 1893, nihena ny faritry ny zaridaina noho ny fananganana ny Salzburg Theater, izay tranobe lehibe mifanila amin'ny atsimo andrefana. Ny Theater State Salzburg ao Makartplatz dia naorin'ny orinasa Vienne Fellner & Helmer, izay manam-pahaizana manokana amin'ny fananganana teatra, satria ny New City Theatre taorian'ny teatra taloha, izay naorin'ny Printsy Arseveka Hieronymus Colloredo tamin'ny 1775 fa tsy efitrano filalaovana. ravana noho ny tsy fahampian'ny fiarovana.
Ny sary sokitra "Borghesi fencers" eo amin'ny fidirana Makartplatz dia mitovy tanteraka amin'ny sary sokitra tranainy tamin'ny taonjato faha-17 izay hita tany akaikin'i Roma ary ao amin'ny Louvre ankehitriny. Ny sarivongan'ny mpiady miady amin'ny mpitaingina iray dia antsoina hoe fencer Borghesian. Ny fencer Borghesian dia miavaka amin'ny fivoarany anatomika tena tsara ary noho izany dia iray amin'ireo sary sokitra malaza indrindra amin'ny zavakanto Renaissance.
Fiangonana Trinite Masina, Dreifaltigkeitskirche
Tamin'ny 1694, ny Printsy Arseveka Johann Ernst Graf Thun sy Hohenstein dia nanapa-kevitra ny hanorina tranon'ny pretra vaovao' ho an'ireo kolejy roa naorin'izy ireo miaraka amin'ny fiangonana natokana ho an'ny Trinite Masina, Dreifaltigkeitskirche, eo amin'ny sisin-tany atsinanana amin'ny zaridaina Hannibal tamin'izany fotoana izany, ny misolampy. toerana eo anelanelan'ny vavahadin'ny Moyen Âge sy ny lapa Mannerist Secundogenitur. Ankehitriny, ny kianja Makart, ny zaridaina Hannibal teo aloha, dia anjakan'ny fasadin'ny Fiangonana Trinite Masina izay natsangan'i Johann Bernhard Fischer von Erlach teo afovoan'ny tranoben'ny oniversite, ny tranon'ny pretra vaovao'.
Tranon'i Mozart eo amin'ny Kiart Square ao Salzburg
Ao amin'ny "Tanzmeisterhaus", trano no. 8 ao Hannibalplatz, efajoro mitsangana, kely, mahitsizoro mifanandrify amin'ny axis longitudinal mankany amin'ny Fiangonana Trinite, izay nomena anarana hoe Makartplatz nandritra ny androm-piainan'ny mpanakanto izay notendren'ny Emperora Franz Joseph I ho any Vienne. Ny aristokraty, Wolfgang Amadeus Mozart sy ny ray aman-dreniny dia nipetraka tao amin'ny trano iray tao amin'ny rihana voalohany nanomboka tamin'ny 1773 ka hatramin'ny nifindrany tany Vienne tamin'ny 1781, ankehitriny tranombakoka taorian'ny trano tao Getreidegasse izay nahaterahan'i Wolfgang Amadeus Mozart dia nanjary kely.
Fasadin'ny Fiangonana Trinite Masina
Eo anelanelan'ireo tilikambo misongadina, ny fasan'ny Fiangonana Trinite Masina dia mihodinkodina eo afovoany miaraka amin'ny varavarankely mivolom-baravarankely misy tendrils, eo anelanelan'ny pilastera roa sy ny andry roa mitambatra, naorin'i Johann Bernhard Fischer von Erlach nanomboka tamin'ny 1694 ka hatramin'ny 1702. Tilikambo eo amin'ny andaniny roa misy lakolosy sy gables famantaranandro. Eo amin'ny efitra ambanin'ny tafo, ny akanjon'ny mpanorina miaraka amin'ny crook sy ny sabatra, ho toy ny nentim-paharazana iconographic toetra ny Printsy Arseveka Johann Ernst von Thun sy Hohenstein, izay samy nampiasa ny hery ara-panahy sy ara-nofo. Ny helodrano afovoany concave dia manasa ny mpijery hanatona akaiky kokoa sy hiditra ny fiangonana.
Ny ampongatapaka, ilay mampifandray, cylindrique, misy varavarankely mivelatra eo anelanelan'ny fiangonana sy ny dome, dia mizara ho vondrona valo misy varavarankely mahitsizoro kely amin'ny alalan'ny pilastera saro-pady. Ny fresco dome dia nataon'i Johann Michael Rottmayr manodidina ny 1700 ary mampiseho ny fanokanana an'i Maria miaraka amin'ny fanampian'ny anjely masina, mpaminany ary patriarika.
Ao amin'ny valindrihana dia misy ampongatapaka faharoa kely kokoa izay misy varavarankely mahitsizoro. Johann Michael Rottmayr no mpanao hosodoko nohajaina sy be olona indrindra tamin'ny Baroque voalohany tany Aotrisy. Nohajain’i Johann Bernhard Fischer von Erlach fatratra izy, araka ny drafitry ny Fiangonana Trinite naorin’ny Printsy Arseveka Johann Ernst von Thun sy Hohenstein tamin’ny 1694 ka hatramin’ny 1702.
Ny efitrano lehibe oval dia anjakan'ny hazavana izay mamiratra amin'ny varavarankely semicircular eo ambonin'ny alitara lehibe, izay mizara ho rectangles kely, ka ireo mahitsizoro kely dia mizara ho antsoina hoe slug pane ao anaty toho-tantely offset. Ny alitara avo dia avy amin'ny famolavolana nataon'i Johann Bernhard Fischer von Erlach. Ny reredos an'ny alitara dia aedicula, rafitra marbra misy pilastera ary gable andohalambo fisaka. Ny Trinite Masina sy ny anjely roa miankohoka dia aseho ho vondrona plastika.
Ny polipitra misy ny hazo fijalian'ny mpitory teny dia ampidirina ao amin'ny rindrin'ny rindrina eo ankavanana. Eo amin'ny rindrina diagonaly efatra eo amin'ny gorodona marbra ny pews, izay misy lamina manasongadina ny oval amin'ny efitrano. Ao amin'ny crypt dia sarcophagus miaraka amin'ny fon'ny Printsy Arseveka Johann Ernst Count Thun sy Hohenstein miorina amin'ny famolavolana nataon'i Johann Bernhard Fischer von Erlach.
Linzer Gasse, ny lalana lehibe lavan'ny tanàna taloha Salzburg eo amoron'ny ankavanan'ny Salzach, dia mitarika miakatra avy any Platzl mankany amin'ny Schallmoserstraße mankany Vienne. Fotoana fohy taorian'ny niandohan'ny Linzer Gasse teo amin'ny haavon'ny Stefan-Zweig-Platz ny Vavahadin'i Francis dia hita eo ankavanana, atsimo, sisin'ny Linzer Gasse. Ny vavahadin'i Francis dia lalana 2 rihana avo, vavahady mifanentana amin'ny rustic mankany Stefan-Zweig-Weg mankany amin'ny seranan-tsambo Francis ary mankany amin'ny Monastera Capuchin ao Capuzinerberg. Ao amin'ny tendron'ny andohalambo no misy ny kasety miaramila voasokitra miaraka amin'ny akanjon'i Count Markus Sittikus avy any Hohenems, nanomboka tamin'ny 1612 ka hatramin'ny 1619 ny evekan'ny archfoundation Salzburg, ilay mpanorina ny vavahadin'i Francis. Eo ambonin'ny kasety miaramila dia fanamaivanana izay misy ny fanilikilihana ny HL. Francis amin'ny fandrakofana amin'ny gable tsofina dia aseho, nanomboka tamin'ny 1617.
Ny ampinga orona ao Linzer Gasse Salzburg
Ny ifantohan'ny sary nalaina tao amin'ny Linzer Gasse dia eo amin'ny brackets vy, fantatra ihany koa amin'ny hoe ampinga orona. Namboarin'ny mpanefy vy hatramin'ny Moyen Âge ny ampinga orona mpanao asa tanana. Misarika ny saina amin'ny alalan'ny marika toy ny fanalahidy ilay asa tanana atao dokam-barotra. Ny Guilds dia orinasa mpanao asa tanana noforonina tamin'ny Moyen Âge mba hiarovana ny tombontsoa iombonana.
Ao amin'ny Linzer Gasse No. 41 dia misy ny Fiangonana Sebastians izay miaraka amin'ny ilany atsimo-atsinanana lava sy ny tilikambo façade mifanaraka amin'i Linzer Gasse. Ny Fiangonan'i St. Sebastian voalohany dia nanomboka tamin'ny 1505-1512. Izy io dia naorina tamin'ny 1749-1753. Ny alitara avo ao amin'ny apse boribory nahemotra dia manana rafitra marbra somary miondrika miaraka amin'ny amboara misy pilastera, andry roa aseho, entablature mahitsy ary tampony volute. Eo afovoany dia misy sarivongana miaraka amin'i Maria miaraka amin'ny zaza manodidina ny 1610. Ao amin'ny ampahany dia misy ny fanamaivanana an'i Saint Sebastian tamin'ny 1964.
Ny fidirana amin'ny fasan'i Sebastian avy any Linzer Straße dia eo anelanelan'ny chorale an'ny Fiangonana Sebastian sy ny Altstadthotel Amadeus. Vavahadin'ny andohalambo semicircular, izay sisintany amin'ny pilasters, entablature ary ambony avy amin'ny 1600 miaraka amin'ny gable tsofina, izay misy ny akanjon'ny mpanorina sy mpanorina, Prince Arseveka Wolf Dietrich.
Ny fasan'i Sebastian dia mifandray amin'ny avaratra-andrefan'ny Fiangonana Sebastian. Izy io dia naorina tamin'ny 1595-1600 tamin'ny anaran'ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich ho solon'ny fasana efa nisy hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16, modely amin'ny Campi Santi Italiana. Camposanto, italianina amin'ny hoe "saha masina", no anarana italiana ho an'ny fasana voahidy mitovitovy amin'ny tokotany miaraka amin'ny andohalambo misokatra ao anatiny. Ny fasan'i Sebastian dia voahodidin'ny arcades amin'ny lafiny rehetra. Ny arcades dia voarakotra amin'ny vaults groin eo anelanelan'ny fehikibo arched.
Teo amin'ny sahan'ny fasan'i Sebastian teo akaikin'ny lalana mankany amin'ny mausoleum, ilay mpankafy Mozart Johann Evangelist Engl dia nanana fasana fampirantiana naorina misy ny fasan'ny fianakaviana Nissen. Georg Nikolaus Nissen dia nanana fanambadiana faharoa tamin'i Constanze, Mozart maty vady. Leopold rain'i Mozart anefa dia nalevina tao amin'ilay antsoina hoe fasana iombonana miaraka amin'ny isa 83, ankehitriny ny fasan'i Eggersche eo amin'ny ilany atsimon'ny fasana. Nalevina tao St. Marx any Vienne i Wolfgang Amadeus Mozart, ny reniny any Saint-Eustache any Paris ary i Nannerl rahavaviny any St. Peter any Salzburg.
Eo amin'ny zoron'ny trano eo amin'ny zoron'ny Dreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse, ilay antsoina hoe "Münchner Hof", dia misy sary sokitra mipetaka amin'ny sisiny mipoitra eo amin'ny rihana voalohany, mampiseho moanina iray mitsangana amin'ny sandry, ny tanana havia mitazona ny boky. Ny akanjo ofisialin'i Munich dia moanina mitazona boky fianianana amin'ny tanany havia, ary mianiana eo ankavanana. Ny akanjon'i Munich dia fantatra amin'ny anarana hoe Münchner Kindl. Ny Münchner Hof no toerana nijoroan'ny trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra any Salzburg, ny "Goldenes Kreuz-Wirtshaus".
Salzach any Salzburg
Ny Salzach dia mikoriana mianavaratra mankany amin'ny Inn. Ny fandefasana sira izay niasa teo amin’ilay renirano no nahatonga ny anarany. Ny sira avy any Hallein Dürrnberg no loharanom-bola lehibe indrindra ho an'ireo arseveka Salzburg. Ny Salzach sy Inn dia mihazakazaka eo amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Bavaria izay misy sira ihany koa ao Berchtesgaden. Ireo toe-javatra roa ireo no fototry ny fifandirana teo amin'ny Arsevekan'i Salzburg sy Bavaria, izay nahatratra ny fara tampony tamin'ny 1611 tamin'ny fibodoana an'i Berchtesgaden nataon'ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich. Vokatr'izany, Maximilian I, Duke of Bavaria, dia nibodo an'i Salzburg ary nanery ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich hiala amin'ny toerany.
Tilikambon'i Salzburg Town Hall
Mamakivaky ny andohalambon'ny lapan'ny tanàna ianao dia mankao amin'ny kianjan'ny lapan'ny tanàna. Any amin'ny faran'ny kianjan'ny lapan'ny tanàna, ny tilikambon'ny lapan'ny tanàna dia mijoro eo amin'ny sisin'ny fasan'ny rococo amin'ny tranobe. Ny tilikambon'ny lapan'ny tanàna taloha dia napetraky ny pilastera goavam-be teo ambonin'ny cornice misy pilasters an-jorony. Ao amin'ny tilikambo dia misy tilikambo lakolosy hexagonal kely misy dome maromaro. Ny tilikambo lakolosy dia misy lakolosy kely roa tamin'ny taonjato faha-14 sy faha-16 ary lakolosy lehibe iray tamin'ny taonjato faha-20. Niankina tamin’ny lakolosy ny mponina tamin’ny Moyen Âge, satria tamin’ny taonjato faha-18 vao nampiana ny famantaranandro tilikambo. Ny lakolosy dia nanome fotoana ho an'ny mponina ary naneno rehefa nisy hain-trano.
Ny Alte Markt dia efajoro mahitsizoro izay voakitika amin'ny ilany avaratra tery amin'ny arabe Kranzlmarkt-Judengasse ary mivelatra amin'ny endrika mahitsizoro any atsimo ary misokatra mankany amin'ny trano fonenana. Ny kianja dia voarafitra amin'ny andalana mihidy misy trano mihaja, 5 ka hatramin'ny 6 rihana, ary ny ankamaroany dia moyen Âge na tamin'ny taonjato faha-16. Ny trano dia ampahany 3- ka hatramin'ny 4-, ampahany 6- hatramin'ny 8-axis ary ny ankamaroany dia manana varavarankely parapets mahitsizoro sy eaves misy profil.
Ny fanjakazakan'ny fasan-damba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lambam-baravarana mahitsy, ny haingo amin'ny endrika slab na ny haingo marefo tamin'ny taonjato faha-19 dia manapa-kevitra amin'ny toetran'ny habaka. Ny fomba slab Josephine dia nampiasa ireo tranobe tsotra tany ambanivohitra, izay nandrava ny lamina tectonic ho sosona rindrina sy takelaka. Eo afovoan'ny kianja akaiky eo amin'ny Alter Markt dia misy ny loharanon-tsena taloha, natokana ho an'i St. Florian, miaraka amin'ny tsanganana Floriani eo afovoan'ny loharano.
Ny koveta fantsakana octagonal vita amin'ny marbra Untersberg dia naorina tamin'ny 1488 ho solon'ny lavadrano tranainy iray taorian'ny nanamboarana fantsona rano fisotro avy amin'ny Gersberg eo ambonin'ny tetezan'ny tanàna mankany amin'ny tsena taloha. Nanomboka tamin'ny 1583 ny makarakara miolikolika miloko miloko miloko eo amin'ny loharano, izay mifarana amin'ny grotesques vita amin'ny vy, ibexes, vorona, mpitaingina ary loha ny tendrony.
Ny Alte Markt dia efajoro mahitsizoro izay voakitika amin'ny ilany avaratra tery amin'ny arabe Kranzlmarkt-Judengasse ary mivelatra amin'ny endrika mahitsizoro any atsimo ary misokatra mankany amin'ny trano fonenana.
Ny kianja dia voarafitra amin'ny andalana mihidy misy trano mihaja, 5 ka hatramin'ny 6 rihana, ary ny ankamaroany dia moyen Âge na tamin'ny taonjato faha-16. Ny trano dia ampahany 3- ka hatramin'ny 4-, ampahany 6- hatramin'ny 8-axis ary ny ankamaroany dia manana varavarankely parapets mahitsizoro sy eaves misy profil.
Ny fanjakazakan'ny fasan-damba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lambam-baravarana mahitsy, ny haingo amin'ny endrika slab na ny haingo marefo tamin'ny taonjato faha-19 dia manapa-kevitra amin'ny toetran'ny habaka. Ny fomba slab Josephine dia nampiasa ireo tranobe tsotra tany ambanivohitra, izay nandrava ny lamina tectonic ho sosona rindrina sy takelaka. Ny rindrin'ny trano dia voaravaka pilastera fa tsy pilastera lehibe.
Eo afovoan'ny kianja akaiky eo amin'ny Alter Markt dia misy ny loharanon-tsena taloha, natokana ho an'i St. Florian, miaraka amin'ny tsanganana Floriani eo afovoan'ny loharano. Ny koveta fantsakana octagonal vita amin'ny marbra Untersberg dia naorina tamin'ny 1488 ho solon'ny lavadrano tranainy iray taorian'ny nanorenana fantsona rano fisotro avy amin'ny Gersberg eo ambonin'ny tetezan'ny tanàna mankany amin'ny tsena taloha. Ny Gersberg dia ao amin'ny dobo atsimoandrefana eo anelanelan'ny Gaisberg sy ny Kühberg, izay faritra avaratrandrefan'ny Gaisberg. Nanomboka tamin'ny 1583 ny makarakara miolikolika miloko miloko miloko eo amin'ny loharano, izay mifarana amin'ny grotesques vita amin'ny vy, ibexes, vorona, mpitaingina ary lohany.
Eo amin'ny haavon'ny Florianibrunnen, eo amin'ny ilany atsinanan'ny kianja, ao amin'ny trano no. 6, dia ny fivarotam-panadinan'ny printsy-arseveka taloha naorina tamin'ny 1591 tao amin'ny trano iray misy tora-baravarankely baroque tara sy tafo misy volutes ambony nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato faha-18.
Ny fivarotam-panadinan'ny printsy-arseveka tranainy ao amin'ny gorodona dia manana fivarotana 3-axis eo anoloana manodidina ny taona 1903. Ny fivarotam-panafody voatahiry, ny efitrano fiasan'ny fivarotam-panafody, misy talantalana, latabatra misy fanafody ary koa ny fanaka sy ny fitaovana tamin'ny taonjato faha-18 dia Rococo . ny levitra tao amin’ny trano mifanolo-bodirindrina n°7 no nisy voalohany ary nafindra tany amin’ny toerana misy azy ankehitriny, trano n°. 6, tamin’ny 1903.
Café Tomaselli ao amin'ny Alter Markt No. 9 any Salzburg dia naorina tamin'ny 1700. Io no kafe tranainy indrindra any Aotrisy. I Johann Fontaine, izay avy any Frantsa, dia nahazo alalana hanolotra sôkôla sy dite ary kafe tao amin’ny Goldgasse teo akaiky teo. Taorian'ny nahafatesan'i Fontaine dia niova tanana imbetsaka ny trano fisotroana kafe. Tamin'ny 1753, ny trano fisotroana kafe Engelhardsche dia noraisin'i Anton Staiger, lehiben'ny fitsarana ny Arseveka Siegmund III. Count Schrattenbach. Tamin'ny 1764 i Anton Staiger dia nividy ny "Abraham Zillnerische mipetraka eo amin'ny zoron'ny tsena taloha", trano iray misy fasadin'ny 3-axis manoloana ny Alter Markt ary fasadin'ny 4-axis manoloana an'i Churfürststrasse ary nomena rindrina mitongilana amin'ny gorodona ary varavarankely manodidina ny 1800. Staiger dia nanova ny trano fisotroana kafe ho trano tsara tarehy ho an'ny kilasy ambony. Nandeha matetika ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana Mozart sy Haydn Café Tomaselli. Nividy ilay kafe i Carl Tomaselli tamin'ny 1852 ary nanokatra ny kiosk Tomaselli tandrifin'ny kafe tamin'ny 1859. Nampidirin'i Otto Prossinger ny lavarangana tamin'ny 1937/38. Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, ny Amerikanina dia niasa ny kafe tamin'ny anarana hoe Forty Second Street Café.
Tsangambato Mozart nataon'i Ludwig M. Schwanthaler
Ludwig Michael von Schwanthaler, taranaka farany amin'ny fianakavian'ny mpanao sary sokitra ambony aotrisianina Schwanthaler, dia namorona ny tsangambato Mozart tamin'ny 1841 tamin'ny faha-50 taona nahafatesan'i Wolfgang Amadeus Mozart. Ny sary sokitra varahina mirefy telo metatra ny haavony, nataon'i Johann Baptist Stiglmaier, talen'ny fanamboarana mineraly tao Munich, dia natsangana tamin'ny 4 Septambra 1842 tao Salzburg, teo afovoan'ilay Michaeler-Platz tamin'izany fotoana izany.
Ny endrika varahina mahazatra dia mampiseho Mozart amin'ny toerana mifanohitra amin'ny zipo sy palitao ankehitriny, stylus, takelaka mozika (horonan-taratasy) ary fehiloha laurel. Maneho ny asan'i Mozart eo amin'ny sehatry ny fiangonana, kaonseritra sy ny mozika an-trano ary koa ny opera ny fanoharana natao toy ny sary vonjy taitra varahina. Ny Mozartplatz ankehitriny dia noforonina tamin'ny 1588 tamin'ny fandravana trano isan-karazany teo ambany fitarihan'ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich von Raitenau. Ny trano Mozartplatz 1 dia ilay antsoina hoe New Residence, izay misy ny Museum Salzburg. Ny sarivongan'i Mozart dia iray amin'ireo lohahevitra malaza indrindra amin'ny carte postale ao amin'ny tanàna tranainy ao Salzburg.
Drum Dome ao amin'ny Kollegienkirche ao Salzburg
Ao ambadiky ny trano fonenana, ny dome amponga ao amin'ny Salzburg Collegiate Church, izay naorina tao amin'ny faritr'i Paris Lodron University tamin'ny 1696 ka hatramin'ny 1707 nataon'ny Printsy Arseveka Johann Ernst Graf von Thun sy Hohenstein miorina amin'ny famolavolana nataon'i Johann Bernhard Fischer von Erlach teo ambany fanaraha-mason'ny ny court aster mason Johann Grabner dia mizara octagonal amin'ny bara roa.
Eo akaikin'ny dome amponga no misy ny tilikambo balustrad an'ny Collegiate Church, eo amin'ny zorony izay ahitanao sarivongana. Apetaka eo amin'ny dome amponga eo ambonin'ny mason'ny dome ny lanterne iray, rafitra mivelatra boribory. Ao amin'ny fiangonana Baroque, ny fanilo dia saika mandrafitra ny faran'ny dome ary maneho loharano manan-danja amin'ny hazavan'ny andro.
Ny Residenzplatz dia noforonin'ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich von Raitenau tamin'ny fanesorana trano maromaro tao Aschhof manodidina ny 1590, kianja kely kokoa mifanitsy amin'ny tranobe lehibe Hypo ankehitriny ao Residenzplatz, izay nandrakotra manodidina ny 1,500 m², ary ny fasan'ny katedraly, izay avaratry ny ny katedraly misy. Ho solon'ny fasan'ny katedraly, ny fasan'i Sebastian dia noforonina teo akaikin'ny fiangonan'i St. Sebastian teo amoron'ny ankavanan'ny tanàna taloha.
Manaraka ny Aschhof sy mankany amin'ny tranon'ny tanàna, nisy rindrina mafy nanodidina ny fasan'ny katedraly tamin'izany fotoana izany, ny rindrin'ny trano mimanda, izay maneho ny sisin-tany eo anelanelan'ny tanàna andriana sy ny tanàna. Nafindran’i Wolf Dietrich ho any amin’ny katedraly koa io manda io tamin’ny 1593. Toy izany no namoronana ny kianja manoloana ny trano fonenana taloha sy vaovao, izay nantsoina hoe kianja lehibe tamin’izany.
The Court Arches mampifandray ny Kianja Cathedral miaraka amin'i Franziskaner Gasse
Ilay antsoina hoe Wallistrakt, izay misy ampahany amin'ny Oniversite Paris-Lodron ankehitriny, dia naorin'ny Printsy Arseveka Paris Count von Lodron tamin'ny 1622. Nantsoina hoe Wallistrakt ilay trano, avy amin'i Maria Franziska Countess Wallis.
Ny ampahany tranainy indrindra amin'ny taratasy mivalona any Wallis dia ilay antsoina hoe tranobe andohalambo misy rihana misy rihana telo izay mandrafitra ny rindrina andrefan'ny kianjan'ny katedraly. Ny rihana dia mizara roa fisaka, mipetaka mitsivalana, izay misy ny varavarankely. Ny fasana fisaka dia manantitrantitra mitsangana amin'ny alàlan'ny pilasters zoro rusticated sy ny famaky varavarankely.
Teo amin'ny rihana faha-2 ny rihana lehibe amin'ny tranoben'ny andohalambo. Any avaratra, manamorona ny elatra atsimon'ny trano fonenana izy io, any atsimo, eo amin'ny Arkabbey an'i Md Piera. Ao amin'ny faritra atsimon'ny tranoben'ny andohalambo misy ny tranombakoka St. Peter, anisan'ny tranombakoka DomQuartier. Tao amin'io faritra atsimon'ny tranoben'ny andohalambo io no nisy ny tranon'ny printsy-arevekan'i Wolf Dietrich.
Ny arcades dia efitrano andry 3-axis, misy rihana 2 izay naorina tamin'ny 1604 teo ambany fitarihan'ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich von Raitenau. Ny andohalambo ao an-tokotany dia mampifandray ny Domplatz amin'ny axis Franziskanergasse Hofstallgasse, izay mandeha orthogonally mankany amin'ny fasan'ny katedraly ary vita tamin'ny 1607.
Tamin'ny alalan'ny tohodranon'ny tokotany no nidiran'ny olona avy any andrefana teo anoloan'ny kianjan'ny katedraly, toy ny tamin'ny andohalambo mpandresy. Ny "porta triumphalis", izay nokasaina hisokatra tamin'ny andohalambo dimy mankany amin'ny kianjan'ny katedraly tany am-boalohany, dia nandray anjara tamin'ny fiafaran'ny filaharana nataon'ny printsy-arseveka.
Ny Katedraly Salzburg dia natokana ho an'ny hll. Rupert sy Virgil. Ankalazaina amin'ny 24 septambra, fetin'i Md Rupert, ny fiarovana. Ny Katedraly Salzburg dia tranobe Baroque izay notokanana tamin'ny 1628 nataon'ny Printsy Arseveka Paris Count von Lodron.
Ny fiampitana dia eo amin'ny ilany atsinanana, eo anoloan'ny katedraly. Eo ambonin'ny fiampitana dia ny dome amponga 71 metatra ny haavon'ny katedraly misy pilasters zorony sy varavarankely mahitsizoro. Ao amin'ny dome dia misy sary sokitra valo misy sary avy amin'ny Testamenta Taloha amin'ny andalana roa. Ireo seho dia mifandray amin'ny seho momba ny fijalian'i Kristy tao an-trano. Eo anelanelan'ny andalana fresco dia misy andalana misy varavarankely. Ny sarin'ireo evanjelistra efatra dia hita eo amin'ny faritry ny faritra misy ny dome.
Eo ambonin'ny andry mitongilana dia misy pendants trapezoidal mba hifindra avy amin'ny drafitra efa-joron'ny fiampitana mankany amin'ny amponga octagonal. Ny dome dia manana bikan'ny tranom-bakoka monasitera, miaraka amin'ny endrika miolikolika izay lasa tery kokoa mankany amin'ny tampony eo ambonin'ny fototry ny amponga amin'ny lafiny tsirairay amin'ny polygon. Ao amin'ny vertex afovoany dia misy rafitra openwork eo ambonin'ny maso dome, ny fanilo, izay misy ny Fanahy Masina toy ny voromailala. Ny fiampitana dia mahazo saika ny hazavana rehetra avy amin'ny lanterne dome.
Ao amin'ny Katedraly Salzburg dia miposaka ny hazavana amboarampeo tokana, izay misy alitara avo mijoro malalaka, rafitra vita amin'ny marbra miaraka amin'ny pilasters ary ny gable miforitra, mitsoka. Ny tampon'ny alitara avo misy gable telozoro mitsoka dia voaravaka volutes mideza sy caryatids. Ny tontonana alitara dia mampiseho ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty niaraka tamin’ny Hll. Rupert sy Virgil ao amin'ny fizarana. Ao amin'ny mensa, ny latabatry ny alitara, dia misy reliquary an'i St. Rupert sy Virgil. Rupert no nanorina an'i St. Peter, monasitera voalohany tany Aotrisy, i Virgil no abbot an'i St. Peter ary nanangana ny katedraly voalohany tao Salzburg.
Ny tranon'ny Katedraly Salzburg dia misy fefy efatra. Ny nave lehibe dia miaraka amin'ny andaniny roa amin'ny andalana misy trano fiangonana sy oratorio eo ambony. Ny rindrina dia voarafitra amin'ny pilastera roa sosona amin'ny filaharana lehibe, miaraka amin'ny shaft malama sy kapitaly mitambatra. Eo ambonin'ny pilasters dia misy circumferential, cranked entablature izay ipetrahan'ny barika misy tady roa.
Ny cranking dia ny sarin'ny cornice mitsivalana manodidina ny fisondrotry ny rindrina mitsangana, misintona cornice eo ambonin'ny singa iray mipoitra. Ny teny hoe entablature dia midika fa ny fitambaran'ny singa ara-drafitra marindrano eo ambonin'ny andry.
Ao amin'ny efitrefitra eo anelanelan'ny pilastera sy ny entablature dia misy arcades avo lenta, lavarangana mipoitra eo amin'ny consoles volute ary varavarana oratory roa. Oratorio, efitrano fivavahana kely misaraka, dia hita toy ny bozaka eo amin'ny galeran'ny nave ary misy varavarana mankany amin'ny efitrano lehibe. Matetika tsy misokatra ho an’ny besinimaro ny kabary fa natokana ho an’ny vondron’olona manokana, ohatra, ny mpitondra fivavahana, ny mpikambana ao amin’ny lamina, ny firahalahiana na ny mpino manana ny maha izy azy.
Ny sandry miampita nave tokana sy ny antoko mpihira dia samy mifandray amin'ny zioga mahitsizoro amin'ny fiampitana efamira amin'ny semicircle. Ao amin'ny conche, ny semicircular apse, an'ny antoko mpihira, 2 amin'ny gorodona 3 varavarankely dia natambatra tamin'ny pilasters. Ny fifindrana mankany amin'ny fiampitana ny nave lehibe, ny sandry miampita ary ny amboarampeo dia voafehin'ny sosona pilastera marobe.
Safotry ny hazavana ny trikonchos raha ao anatin'ny haizina ny nave noho ny hany jiro ankolaka. Mifanohitra amin'ny drafitra gorodona toy ny lakroa latinina, izay misy nave mahitsy eo amin'ny faritra fiampitana dia miampita amin'ny zoro havanana amin'ny alàlan'ny transept mahitsy toy izany koa, ao amin'ny amboarampeo telo-conch, trikonchos, conches telo, izany hoe apses semicircular mitovy habe. , eo amin'ny sisin'ny efamira dia toy izao no mifamatotra ka ny planina gorodona dia manana endrika ravina jirofo.
Ny stucco fotsy miaraka amin'ny motif haingo indrindra miaraka amin'ny mainty eo amin'ny sisiny sy ny fahaketrahana dia mandravaka ny festoons, ny fijery voaravaka avy eny ambanin'ny andohalambo, ny lalan'ny trano fiangonana ary ny faritry ny rindrina eo anelanelan'ny pilasters. Ny stucco dia miitatra amin'ny entablature miaraka amin'ny frieze tendril ary mamorona filaharan'ny saha geometrika miaraka amin'ny frame mifandray akaiky ao amin'ny vault eo anelanelan'ny akora. Ny gorodona amin'ny katedraly dia ahitana Untersberger mamirapiratra sy marbra Adnet miloko mena.
Ny Fortress Hohensalzburg dia hita eo amin'ny Festungsberg eo ambonin'ny tanàna tranainy Salzburg. Naorin'ny Arseveka Gebhard, olona nohavaozina tao amin'ny Arsidiosezin'i Salzburg, manodidina ny taona 1077 izy io ho lapa romanesque misy rindrina boribory manodidina ny tampon-kavoana. Ny Arseveka Gebhard dia navitrika tao amin'ny tranoben'ny Emperora Heinrich III, 1017 - 1056, Mpanjaka Romana-Alemana, Emperora ary Duke of Bavaria. Tamin'ny 1060 dia tonga tao Salzburg izy tamin'ny naha-areveka azy. Nanokan-tena indrindra izy tamin'ny fananganana ny diosezy Gurk (1072) sy ny monasitera Benedictine Admont (1074).
Nanomboka tamin'ny 1077 dia tsy maintsy nijanona tao Swabia sy Saxony nandritra ny 9 taona izy, satria taorian'ny nandroahana an'i Henri IV sy ny fandroahana an'i Henri IV dia niaraka tamin'ny mpanjaka mpanohitra Rudolf von Rheinfelden ary tsy afaka nanamafy ny tenany hanohitra an'i Heinrich IV. ao amin’ny arsevekany. Manodidina ny taona 1500 teo ho eo ny trano fonenana teo ambany fitarihan'ny Arseveka Leonhard von Keutschach, izay nitondra ny absolutista sy ny nepotista, dia voaravaka tsara ary nitarina tamin'ny endriny ankehitriny ny trano mimanda. Ny hany fahirano tsy nahomby tamin'ny trano mimanda dia natao tamin'ny Adin'ny Tantsaha tamin'ny 1525. Hatramin'ny nisian'ny laika ny arseveka tamin'ny 1803, dia teo am-pelatanan'ny fanjakana ny trano mimanda Hohensalzburg.
Efa tamin'ny Moyen Âge dia nisy "Rosstümpel" tao Kapitelplatz, tamin'izany fotoana izany dia mbola teo afovoan'ny kianja. Teo ambany fitarihan'ny Printsy Arseveka Leopold Freiherr von Firmian, zanak'anabavin'ny Printsy Arseveka Johann Ernst Graf von Thun sy Hohenstein, dia naorina tamin'ny 1732 ilay complexe cruciforme vaovao misy zorony miolikolika sy balustrade, araka ny drafitr'i Franz Anton Danreiter, lehiben'ny inspektera ny Salzburg. zaridainan'ny fitsarana.
Ny fidirana ho an'ny soavaly mankany amin'ny tavy rano dia mitarika mivantana amin'ny vondron'ny sary sokitra, izay mampiseho ny andriamanitry ny ranomasina Neptune miaraka amin'ny trident sy satro-boninahitra amin'ny soavaly an-dranomasina misy rano misy tritons 2 miboiboika amin'ny sisiny, zavaboary hybrid, ny antsasany. misy vatan'olombelona ambony sy vatana ambany toy ny trondro miaraka amin'ny vombony, ao anaty lavaka boribory boribory amin'ny aedicule miaraka amin'ny pilastera roa, entablature mahitsy ary tampony gable volute miondrika voasatroka vazy haingo. Ny sary sokitra baroque sy mihetsika dia nataon'ilay mpanao sary sokitra Salzburg Josef Anton Pfaffinger, izay nanamboatra ny loharano Floriani tao amin'ny Alter Markt ihany koa. Eo ambonin'ny tafo dia misy chronograma, soratra amin'ny teny latinina, izay misy litera lehibe asongadina manome isa taona ho isa, miaraka amin'ny sarin'ny Printsy Arseveka Leopold Freiherr von Firmian eo amin'ny saha gable.
Toeram-ponenan'ny Hercules Fountain Salzburg
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany hitanao rehefa miditra ny tokotanin'ny trano fonenana taloha avy amin'ny Residenzplatz dia ny grotto niche misy loharano ary Hercules mamono ny dragona eo ambanin'ny arcades amin'ny vestibule andrefana. Ny sarin'i Hercules dia tsangambato momba ny zavakanto Baroque izay nampiasaina ho fitaovana politika. Hercules dia mahery fo malaza amin'ny tanjany, tarehimarika avy amin'ny angano grika. Ny fivavahana mahery fo dia nanana anjara toerana lehibe ho an'ny fanjakana, satria ny antso ho an'ireo tarehimarika semi-divine dia maneho ny maha-ara-dalàna sy ny fiarovana an'Andriamanitra.
Ny sarin'ny famonoana ilay dragona nataon'i Hercules dia nifototra tamin'ny drafitry ny Printsy Arseveka Wolf Dietrich von Raitenau, izay nanana ny trano fonenana vaovao tany atsinanan'ny katedraly naorina indray ary ny trano fonenan'ny arseveka tena izy tany andrefan'ny katedraly dia naorina indray.
Efitrano fihaonambe Salzburg Residence
Hieronymus Graf von Colloredo, arsevekan'ny printsy Salzburg farany talohan'ny secularization tamin'ny 1803, dia nanana ny rindrin'ny efitranom-panjakana tao amin'ny trano fonenana voaravaka haingo tsara amin'ny fotsy sy volamena nataon'i Peter Pflauder, mpanao plastera tao amin'ny fitsarana, mifanaraka amin'ny tsiro klasika tamin'izany fotoana izany.
Ny fatana vita amin'ny taila klasika voatahiry dia nanomboka tamin'ny taona 1770 sy 1780. Tamin’ny 1803, dia niova ho fitondrana laika ny arseveka. Miaraka amin'ny tetezamita ho any amin'ny fitsarana imperial, ny trano fonenana dia nampiasain'ny fianakavian'ny imperial Austria ho trano fonenana faharoa. Ny Habsburgs dia nanome ny efitranom-panjakana tamin'ny fanaka avy amin'ny Hofimmobiliendepot.
Ny efitrano fihaonambe dia anjakan'ny jiro elektrika amin'ny chandelier 2, natao ho an'ny fampiasana labozia, mihantona amin'ny valindrihana. Ny chamdelier dia singa jiro, izay antsoina koa hoe "Luster" any Aotrisy, ary miaraka amin'ny fampiasana loharanom-pahazavana sy vera maromaro mba hanamafisana ny hazavana dia mamokatra kilalao jiro. Ny chandelier dia matetika ampiasaina amin'ny tanjona fanehoana ao amin'ny efitrano misongadina.